EWAMT: Nahazo fampiofanana momba ny fampitam-baovaon’olontsotra ny vehivavy Yemenita miisa 112 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2018 3:57 GMT
Nahavita dingana lehibe tamin'ny fampiofanana momba ny fitaovan'ny media vaovao ho an'ireo vehivavy mpanao politika, mpikatroka, ary mpiasa ho amin'ny zon'olombelona ao Yemen ny EWAMT tetikasa tohanan'ny Rising Voices ‘Fanohanana ireo Vehivavy Mpikatroka amin'ny Teknikan'ny Media’ . Nitatitra ny lehiben'ny tetikasa Ghaida'a Al Absi fa vita ny dingana voalohany tamin'ny tetikasa. Na dia teo aza ny olana ara-teknika toy ny fahatapahan'ny herinaratra matetika sy ny aterineto milona dia nahavita nampiofana bilaogera vehivavy miisa 112 ny tetikasa izay nihoatra ireo mpandray anjara nokendrena miisa 100 tamin'ireo atrikasa miisa folo.
Nandray mpandray anjara miisa 20 ny atrikasa farany ny 25 Janoary. Tsy naniry fotsiny ny hianatra ireo zazavavy ireo fa nametraka fanontaniana marobe ihany koa izy ireo. Nanamarika i Fathi al-Dhafri , mpampianatra tamin'ny atrikasa teo aloha (24 Desambra 2009) hoe :
This is true because of the social pressure on women; they are trying to prove themselves through getting a higher education and gaining new skills. For example, the rate of success among girls in the secondary education is higher than among boys.
Marina izany satria noho ny tsindry ara-tsosialy atao amin'ny vehivavy; Miezaka manaporofo ny tenany izy ireo amin'ny alalan'ny fahazoana fanabeazana ambony kokoa sy ny fahazoana fahaiza-manao vaovao. Ohatra, ambony kokoa noho ny an'ireo tovolahy ny tahan'ny fahombiazana eo amin'ireo ankizivavy ao amin'ny fampianarana ambaratonga faharoa.
Nasongadina tamin'ny gazetin'ny faha 14 Oktobra ihany koa ny tetikasa. Nanamarika ny tenin'i Ghaida'a i Bashir, ilay mpanao gazety nitsidika atrikasa iray:
Ghaida'a lists the plans for the second phase:
Nitanisa ny lisitry ny drafitra ho an'ny dingana faharoa i Ghaida'a :
Nanoratra momba ny fahalalahana i Bee ao amin'ny bilaogy Small Bee:
Niresaka momba ny andraikitry ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonina Yemenita amin'ny vanim-potoana ara-tantara sy ankehitriny i Yemen Al Saeed ao amin'ny Happy Yemen .
“Moa ve isika mivelona ho an'ny tenantsika sa ho an'ny hafa ?” hoy i Hanan Attia nametra-panontaniana.
Nanoratra momba ny fahorian'ny fiainana sy ny fanantenana any amin'ny faran'ny tonelina i Make a difference by posting your comment.
Naniry ny fahombiazan'ny fihaonambe tao London i Kholoud ao amin'ny tetikasa Ambitious.
Efa manana tranonkala ankehitriny ny 24 tamin'i'ireo bilaogera miisa 112 niofana. Indro ny lisitr'ireo bilaogera izay azonao zohiana.